IRiphabhlikhi yaseCzech yehla eJamani, eHungary nase-Austria
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » IRiphabhlikhi yaseCzech yehla eJamani, eHungary nase-Austria
Iindaba zaseOstriya eziziiNdaba • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Inkulumbuso yase-Czech u-Andrej Babis ubhengeze namhlanje ukuba emva kokuvula kwakhona umda neSlovakia izolo, i-Czech Republic izakuphelisa izithintelo zokuhamba eJamani, eHungary nase-Austria ngomso. Umphathiswa uthe ukushenxisa izithintelo yinxalenye yesicwangciso sikarhulumente waseCzech sokuvumela ukuhamba simahla kumazwe amaninzi e-EU ukusukela nge-15 kaJuni.
"Ndiyathemba ukuba ezinzulwini zobusuku ngomso uhambo luza kukhululeka kunye nala mazwe," u-CTK ucaphule i-Babis xa besitsho kuhambo oluya eKarlovy Vary. Urhulumente uzakudibana ekukhululeni uhambo ngolwesiHlanu ngokutsho kweBabis.
I-Austria, ekwabelana ngomda namaCzechs, ivulelekile kubo bonke abamelwane ngaphandle kwe-Itali, kwaye iJamani izakuphelisa izithintelo zomda nge-15 kaJuni.
AmaCzechs acwangcisa ukuvumela ukungena kwiindawo ezingaphezulu kwama-20 zaseYurophu ukusuka ngoJuni 15. Nangona kunjalo, iindwendwe ezivela kwiindawo apho ubhubhane usenamandla khona kuya kufuneka zibonelele ngovavanyo lwe-coronavirus okanye zihlale zodwa.